အဆုတ်ထဲ က အဆိပ်အတောက်တွေ ကို ဂျင်း နဲ့ ဒီလို ရှင်းလိုက်ပါ – Let Pan Daily
အဆုတ် ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဂျင်းနဲ့ ဘယ်လို ဖယ်ရှား မလဲ…? လူတစ်ယောက် အသက်ရှင်ဖို့အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အင်္ဂါ အစိတ် အပိုင်းတွေထဲမှာ အဆုတ် လည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အဆုတ် ကျန်းမာရေးက အရေးကြီးပြီး အဆုတ် ကို သန့်စင်အောင် ထားရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ဆေးလိပ် သောက်တတ်သူတွေဆိုရင် အဆုတ် ကို သတိထားပြီး အဆုတ်ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးသင့်ပါတယ်။ ဂျင်း – ဂျင်းကို အသုံးပြုပြီး အဆုတ်ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်က တွေ့ရှခဲ့တဲ့ သုတေသနအရ ဂျင်းမှာ အဆုတ်ကင်ဆာ ရောဂါကိုလည်း ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ အဆုတ်ကို သန့်ရှင်းဖို့ ဂျင်းရေနွေးကြမ်း မီးဖိုပေါ်မှာ ရေနွေးကို ပွက်ပွက်ဆူအောင် တည်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဂျင်းကို ပါးပါးလှီးထားပါ။ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းစာလောက်ကို ရေနွေး ၁ ခွက်ခွဲစာလောက်ထဲ ခပ်လိုက်ပါ။
ဂျင်းတွေ ဖယ်လိုက်ပြီး သံပုရာ သီးလေး အနည်းငယ်ညှစ်ပြီး သောက်လိုက်ပါ။ ဟင်းချက်တိုင်းလည်း ဂျင်းကိုထည့်ပြီး ချက်ပြုတ်ပေးပါ။ ဒီလို နည်းလမ်းတွေက ကိုယ်ခံအားကို တက်စေပြီး အဆုတ်ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ မှတ်ချက် သွေးတိုးရှိသူတွေ၊ နှလုံးရောဂါ ရှိသူတွေကတော့ ဂျင်းကို အလွန်အကျွံမစားသင့်ပါဘူး။
အဆုတျ ထဲက အဆိပျအတောကျတှကေို ဂငျြးနဲ့ ဘယျလို ဖယျရှား မလဲ…? လူတဈယောကျ အသကျရှငျဖို့အတှကျ အရေးကွီးတဲ့ အင်ျဂါ အစိတျ အပိုငျးတှထေဲမှာ အဆုတျ လညျး ပါဝငျနပေါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အဆုတျ ကနျြးမာရေးက အရေးကွီးပွီး အဆုတျ ကို သနျ့စငျအောငျ ထားရှိဖို့ လိုအပျပါတယျ။
အထူးသဖွငျ့ ဆေးလိပျ သောကျတတျသူတှဆေိုရငျ အဆုတျ ကို သတိထားပွီး အဆုတျထဲက အဆိပျအတောကျတှကေို ဖယျရှားပေးသငျ့ပါတယျ။ ဂငျြး – ဂငျြးကို အသုံးပွုပွီး အဆုတျထဲက အဆိပျအတောကျတှကေို ဖယျရှားနိုငျပါတယျ။ ၂၀၁၂ ခုနှဈက တှရှေ့ခဲ့တဲ့ သုတသေနအရ ဂငျြးမှာ အဆုတျကငျဆာ ရောဂါကိုလညျး ကာကှယျနိုငျစှမျးရှိပါတယျ။ အဆုတျကို သနျ့ရှငျးဖို့ ဂငျြးရနှေေးကွမျး မီးဖိုပျေါမှာ ရနှေေးကို ပှကျပှကျဆူအောငျ တညျလိုကျပါ။ ပွီးရငျ ဂငျြးကို ပါးပါးလှီးထားပါ။ လကျဖကျရညျဇှနျး ၁ ဇှနျးစာလောကျကို ရနှေေး ၁ ခှကျခှဲစာလောကျထဲ ခပျလိုကျပါ။
လူသိ နည်းပြီး သတိမမူ ကြတဲ့ တံမြက်စည်း နိမိတ်
ရေဂါလံ ဘယ်လောက် ဆန့်သလဲ ကိုယ်တိုင် တွက်ကြည့်နည်း